Shirkadda Golis oo lacag lagu lahaa ka bixisay haweeney dan yar ah mudo ku xirnayd xabsiga Boosaaso | Golis Telecom Somalia
Shirkadda Golis oo lacag lagu lahaa ka bixisay haweeney dan yar ah mudo ku xirnayd xabsiga Boosaaso
Shirkadda Isgaarsiinta Golis ayaa lacag gaaraysa $2000 ugu deeqday Gareen Maxamed Geedi oo ah haweeney dan-yar ah oo mudo 3 sano ku dhaw ku xirnayd xabsiga wayn ee Boosaaso si ay isaga bixiso lacag loo haystay oo ay ku mutaysatay xabsiga ay mudadaas ku jirtay.
Maamualka shirkadda Golis oo lasoo gaarsiiyay dhibaatada haysata Gareen iyadoo la xiray bishii February ee sanadkii 2013ka xiligaas oo loo qabsaday lacag sharci ahaan loogu yeeshay isamarkaana aysan iyadu awoodin inay iska bixiso.
Intaas kadib ayaa shirkadda Golis iyadoo xil iska saaraysa bulshadeeda inta dhibban ay ugu yaboohday deeqda lacageed ee maanta la gaarsiiyay Gareen Maxamed Geedi si ay ugu bixiso daynta lagu leeyahay ayna xoriyadeeda u hesho.
C/Laahi Yuusuf Muuse oo ka tirsan waaxda xiriirka dadwaynaha shirkadda isgaarisiinta Golis ayaa deeqda lacageed ku wareejiyay Gareen maanta xili ay ku sugnayd maxkamadda darajada 1aad ee Gobalka Bari halkaas oo ay maanta kaga baxday xabsigii sanadaha badnaa ay ku jirtay.
Gareen Maxamed Geedi ayaa ku wareejisay lacagtii ay shirkadda Golis ugu deeqday haweeneydii ku lahayd iyadoo ugu dambayna uga mahadcelisay maamulka iyo shaqaalaha shirkadda Golis doorka ay ka qaateen inay iska bixiso lacagtii ay u xirnayd islamarkaana ay xoriyadeeda hesho.